धमाधम उम्मेदवार छनोट गर्दै माओवादी, तेह्रथुमबाट को–को परे ? - Everest Dainik - News from Nepal
धमाधम उम्मेदवार छनोट गर्दै माओवादी, तेह्रथुमबाट को–को परे ?
तेह्रथुम, असोज ११ । नेकपा माओवादी केन्द्रले तेह्रथुममा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ केन्द्रीय सल्लाहकार विजय सम्बाहाम्फेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । सम्बाहाम्फे निजी तथा संस्थागत विद्यालय संगठन प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष छन् ।
याे पनि पढ्नुस युद्धका मोर्चादेखि सभामुखसम्म ओनसरी घर्तीको संघर्षपूर्ण यात्रा
त्यस्तै समानुपातिकतर्फ केन्द्रीय पोलिटव्युरो सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज दुर्गाप्रसाद चापागाई र पुर्वसांसद फुर्वी शेर्पाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेश तर्फ क्षेत्र नंं. १ मा पार्टीका जिल्ला संयोजक इन्द्रबहादुर इम्सङ र गणेशकुमार सेनेको नाम सिफारिस भएको छ । सेने जिल्ला सहसंयोजक छन् ।
याे पनि पढ्नुस ६ स्थानबाट माओवादी केन्द्र विजयी
त्यसैगरी, समानुपातिकतर्फ दिलकुमारी लिम्बु र तेजेन्द्र कुरुम्बाङ चयन भएका छन् ।
यस्ते क्षेत्र नंं.२ मा प्रत्यक्ष तर्फ पोलिटव्युरो सदस्य सुशिला कन्दङवा, केन्द्रीय सल्लाहकार भीमप्रसाद कन्दङवा र जिल्ला सहसंयोजक ताराप्रसाद भटराईको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै समानुपातिक तर्फ तेजमान कन्दङवा, बलिराज ईङनाम र चुडामणी बरालको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस राजपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री खुवारीरायसहित सयौं नेता माओवादीमा प्रवेश गर्दै
ट्याग्स: maoist center, Tehrathum